EURO 2020: 25ka Cayaaryahan Ee Ugu Sarreeya Oo Ay Tahay In La Daawado – Qeybta 2aad – Garsoore Sports
Garsoore Sports wuxuu kuusoo ururiyey qeybt 2aad ee 25-ka cayaartoy oo ay tahay inaad isha ku hayso marka la cayaarayo mid kamid ah munaasabadaha heerka caalami ee ugu xamaasadda badan caalamka.
Marka hore Qeybta 1aad halkan ka aqriso haddii uu ku seegay.
Courtois ayaa noloshiisa Real Madrid ku billowday si aan fiicnayn, laakiin wuxuu guud ahaan horumariyay nasiibkiisa Santiago Bernabeu tan iyo markii uu kasoo dhaqaaqay kooxda Chelsea 2018, goolhayahan reer ayaa rajeynaya inuu xulkiisa ka caawiyo inay ku guuleeystaan Tartanka Qaramada Yurub xagaagan waxaana ay tahay in il gaar ah lagu hayo goolhayan jooga dheer ee fagaarayaasha kubbada-cagta wacdarro ka dhigi kara.
Muller ayaa laga yaabaa inuu rumaysnaa in mustaqbalkiisa cayaareed ee xulka uu soo idlaaday kaddib markii uu tababare Joachim Low shaaca ka qaaday inuusan xiddigan qorsha ugu jirin kaddib Koobkii Adduunka ee 2018
Balse nasiibkiisa ayaa wanaagsanaaday dib ayaana loogu baahday in loogu yeero si looga faa’iideeysto qibraddiisa waxaana 31 jirkaan ay u badan tahay inuu si toos ah ugu soo laaban doono safka hore ee xulka, isagoo siin doona xoogaa hal abuur ah oo ay aad uga baahnaayeen qeybaha hore ee weerarka.
N’Golo Kante | France
Waxaa jirta oraah oraneysa ”dunnidu 3 meelood laba meel waa biyo inta kalena waa N’golo Kante.” oo dhowaanahan baraha bulshada qabsatay balse mararka qaarkood, waxay u muuqataa inay run tahay maadaama Kante uu awood u leeyahay inuu sida muuqata meel walba uu joogo xilli walba.
Inkastoo ay tani markhaati u tahay heerarkiisa tamarta ee sarreeya, haddana sidoo kale waxaa ugu wacan caqligiisa cayaarta cajiibka ah. Malaha ma jiro kubbad ku guuleyste khadka dhexe ah oo ka wanaagsan adduunka.
Kaddib waqti dheer oo lala xiriirinayay kooxda Manchester United xagaagii la soo dhaafay, Sancho wuxuu si tartiib tartiib ah u bilowday xilli ciyaareedkii 2020-21, laakiin wuxuu kusoo laabtay qaab ciyaareedkiisii fiicnaa tan iyo bishii Janaayo.
21 jirkan garabka ka ciyaara oo booskaasi si wanaagsan ugasoo baxa ayaa ah gambiye xiiso badan kaasoo ku fiican xaaladaha hal ka halka ee daafacyada isla markaana leh xawaare aan caadi aheyn.
Xaqiiqdii waa waqti uun kahor inta uusan helin heerkiisii ugu fiicnaa ee marka uu xulkiisa Ingiriiska ku metalayo Tartankan.
Saamaynta uu Fernandes yeeshay tan iyo markii uu kusoo biiray Manchester United bishii Janaayo 2020 waxay ahayd mid aad u heer sarreeysa, wuxuuna udub-dhexaad u ahaa bandhigyadii wanaagsana ee kooxda Red Devils 17kii billood ee lasoo dhaafay.
Kubbadsameeyahan 26 jirka ah ayaa markan xulkiisa Portugal ku metalaya Tartankan waxaana uu doonayaa in uu helo heerarkiisa ugu sarreeya si uu gacan weyn uga geysto bandhigyo u suuragelin kara inay hantaan tartankan.
Wuxuu ku fiicanyahay rigoora tuurista waana dilaa marka uu helo laadadka xorta ah Iyadoo Cristiano Ronaldo uu yahay mid labada la is oran karo wuu kaga wanaagsanyahay ayaa laga yaabaa inuusan helin fursad uu ku muujiyo labadiisa xirfad Euro 2020!
Eden Hazard waa cayaaryahan muddo dheer loo saadaalinayay inuu ku guuleysan doono Ballon d’Or.
Xaqiiqdii, Real Madrid sidaas ayey ku fakartay markii ay saxiixiisa ku qarashgareeyeen 100 milyan oo yuuro si ay ugala soo wareegaan kooxda Chelsea sannadkii 2019.
Dhaawac ayaa aafaystay weeraryahankan umana helin fursad uu ku muujiyo bandhigyadiisa ugu fiican waayihiisan caasimadda Spain.
Si kastaba ha noqotee, weli wuxuu awood u leeyahay inuu go’aan ka gaaro cayaar kasta.
Waad ku mahadsantahay inaad nala joogtay ilaa dhammaadka. Lasoco qeybta 3aad hana moogaan inaad asxaabtaada lasii wadaagto.